बूढाहरुले छाड्दिनुपर्यो, युवाहरुलाई दिनुपर्यो भन्नु पुँजीवादी शैली हो : मातृका यादव « News24 : Premium News Channel
बूढाहरुले छाड्दिनुपर्यो, युवाहरुलाई दिनुपर्यो भन्नु पुँजीवादी शैली हो : मातृका यादव
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता मातृका यादवले राजनीतिमा पुस्तान्तरणको अवधारणालाई पुँजीवादी शैली भनेर व्याख्या विश्लेषण गरेका छन् ।
आइतबार पार्टीको ८ औँ महाधिवशेनलाई सम्बोध गर्दै बूढाहरुलाई छाडेर नयाँ युवाहरुलाई ठाउँ दिनु भन्नु पुँजीवादी शैली भएको नेता यादवले धारणा व्यक्त गरे ।
उनले भने, ‘अबचाहीँ नयाँ क्रान्तिकारी विचारविना पार्टी अघि बढ्दैन । बीचमा पुस्तान्तरण चलेको छ– बूढाहरुले छाड्दिनुपरो, युवाहरुलाईचाहीँ दिनुपरो । यो पुँजीवादी शैली हो क्या । स्थापित लिडरहरुलाई पाखा लगाइदिने, (देउवाजी त्यसमा खुसी भइहाल्नुहुन्छ) । तर, केही नजान्नेहरुलाईचाहीँ लिडर बनाइदिने । हामीले त हेर्यौँ, धुरन्धार अभ्यास गर्यौँ, माक्र्सवाद पढेको पनि हेर्यौँ । डिग्री गरेर मात्र हुने भए त ? मुख्य कुरा समाजलाई कस्ले बुझ्यौँ र त्यसले क्रान्ति अघि बढाउछ । फेस र एजले हुँदैन ।’
यसअघि उनले माओवादी पार्टीमा प्रश्न सिर्जना भएको र त्यसको जवाफ दिन जम्मा भएको बताए । उनले भने, ‘हामी यहाँ जवाफ दिन हामी जम्मा भएका छौँ । माओवादी आन्दोलन नेपालको मात्र नभई विश्व आन्दोलनको एउटा अंग हो, समग्र क्रान्तिको केन्द्र हो । उपेन्द्रजीले मधेश आन्दोलनको कुरा गर्नुभयो, मलाई लाग्छ कमरेड प्रचण्ड थोरै उदार भइदिएको भए, गिरिजा बाबु र माधवजीको कुरामा कस्सिएर अडान लिइदिएको भए, संघीयताविनाको अन्तरिम संविधानचाहीँ मान्दैनौँ भनेको भए मधेश आन्दोलन हुने थिएन । र, मधेश आन्दोलन भयो । सबै मिलेर स्वीकार्यौँ ।’
बीचमा माओवादीमा प्रचण्ड पथ त्याग्दा बडो संघर्ष सामना गरेको पनि उनले बताएका छन् । ‘माओवादीले विकास गरेको प्रचण्ड पथ विकास गर्नुको साटो छाड्दिऔँ र क्रान्ति रनभुल्लमा पर्यो । प्रचण्डले के गरेको भन्दै आममानिसमा प्रश्न उठ्यो,’ उनले भने, ‘सर्वप्रथम त ममै प्रश्न उठ्यो । सिपीजी, मोहनजी सबै हिँड्नुभयो । हाम्रो हविगत के भयो ? सबभन्दा पहिले मैले छाडे, सबभन्दा पहिले आएर मैले अध्यक्ष प्रचण्डलाई अब यसरी हुँदै एकजुट होऔँ भने ।’